स्थानीय तहमा ओली समूह सबैभन्दा बलियो, कुन पक्षका कति ? (सूचीसहित) - Janadesh Khabar
स्थानीय तहमा ओली समूह सबैभन्दा बलियो, कुन पक्षका कति ? (सूचीसहित)
जनादेश खबर	काठमाडौं	फागुन १, २०७७
नेकपा पार्टी विभाजनपछि नेकपाका स्थानीय तह प्रमुख र उपप्रमुखहरू दुवैतिर बाँडिएका छन् ।
नेकपा साविक एमाले र माओवादी केन्द्रबाट निर्वाचित ३ सय ८८ पालिका प्रमुख र ४ सय ३८ उपप्रमुखको पक्षधरतालाई विश्लेषण गर्द स्थानीय तहमा ओली समूह सबैभन्दा बलियो देखिएको छ ।
समग्रमा स्थानीय तहमा दाहाल–नेपाल समूहभन्दा केपी शर्मा ओली समूहका पक्षमा उभिने प्रमुख र उपप्रमुख बढी देखाएको छ । कतै खुलिनसकेका २४ प्रमुख र २७ उपप्रमुख छन् ।
प्रदेशगत रूपमा हेर्दा हो भने प्रदेश १, गण्डकी, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिमका पालिका प्रमुखमा ओली समूह बलियो देखिन्छ ।
प्रदेश २, वाग्मती र कर्णालीमा दाहाल–नेपाल समूहका पालिका प्रमुख बढी छन् ।
४ सय ३८ स्थानीय तहमा नेकपाका उपप्रमुख रहेकामा ओली समूह प्रदेश १, गण्डकी र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा मात्रै बलियो छ, प्रदेश २, वाग्मती, लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेशमा धेरै उपप्रमुख दाहाल–नेपालतिर लागेका छन् ।
तत्कालीन एमालेबाट निर्वाचित पालिका प्रमुख र उपप्रमुखमध्ये अधिकांश नेकपा विभाजनपछि ओली र दाहाल–नेपाल समूहमा बाँडिएका छन्, ३० जना पालिका प्रमुख भने ‘पर्ख र हेर’ को अवस्थामा छन् तर तत्कालीन माओवादी केन्द्रबाट निर्वाचित पालिका प्रमुखमध्ये प्रदेश २ का ४ र लुम्बिनी प्रदेशका १ जनाबाहेक सबैजसो दाहाल–नेपाल समूहमै देखिन्छन् ।
१ फागुन २०७७, शनिवार १३:५० बजे प्रकाशित
धेरैपछि एउटै मञ्चमा देखिए प्रचण्ड र बाबुराम